WARBIXIN: Sanchez,Lemar,Walcott,Aubameyang & 7 Saxiix Oo La Filayo In Ay Dhacaan Todobaadyada Soo Socda – Kooxda.com
Home 2018 January France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Sanchez,Lemar,Walcott,Aubameyang & 7 Saxiix Oo La Filayo In Ay Dhacaan Todobaadyada Soo Socda
WARBIXIN: Sanchez,Lemar,Walcott,Aubameyang & 7 Saxiix Oo La Filayo In Ay Dhacaan Todobaadyada Soo Socda
Kaliya hal todobaad ayaa la soo dhaafay suuqa Kala iibsiga January laakiin waxa aynu durba aragnay saxiixa ugu weyn suuqan oo la dhamaystiray.
Philippe Coutinho ayaa 142 milyan euro uga tagay Liverpool kuna biiray kooxda Barcelona saxiixaad oo ahaa midkii ugu hadal haynta badanaa todobaadkii ugu horeeyay suuq kala iibsiga.
Laakiin waxa wali sii socon doona hadal haynta iyo waliba saxiixyada la samayn doono maalmaha soo socda ilaa inta ay bishu ka dhamaanayso.
Hadaba waxa aanu warbixintan ku soo bandhigi doonaa 7 saxiix oo dhici kara ka hor inta ayna gaarin 31 bisha January oo ah maalinta uu suuqa kala iibsigu xirmi doono.
Alexis Sanchez – Arsenal to Manchester City: Kadib markii la dhamaystiray heshiiskii Coutinho, Heshiiska Sanchez uu ugu biiri karo City ayaa laga yaabaa in uu noqdo midka ugu hadal haynta badan todobaadyada soo socda, xiddigan ayaa si weyn u doonaya in uu isaga tago Gunners kooxda ugu cad-cadna waa man city.
Thomas Lemar – Monaco to Arsenal ama Liverpool: Kooxaha Arsenal iyo Liverpool ayay labadooduba xiiso u qabaan xiddiga kooxda Monaco, xiddiga reer France ayaa lagu heli kara lacag dhan 90 milyan oo euro hadii ay Monaco fasaxayso inta lagu guda jiro suuqa January.
Jonny Evans – West Brom to Arsenal ama Manchester City: Evans ayaa noqday xiddiga loogu raadinta badan yahay daafacyada Premier league tan iyo xagaagii iyada oo ay isku baacsanayaan kooxaha Man city iyo Arsenal waxana la filayaa in uu midkood ku biiro ka hor inta uuna suuqu xirmin.
Kieran Tierney – Celtic to Manchester United: Shaki La,aan kooxda Man United ayaa raadinaysa daafac bidix kadib dhibaatada ka haysa booskaas waxana uu jose Mourinho isha ku hayaa in uu booskaas buuxiyo inta uuna suuqu xirmin inkasta oo uu Mourinho doonayo xiddiga Tottenham ee Danyy Rose hadana xiddiga kooxda Celtic ee Tierney ayaa ah mid uga jaban kana da,yarka Rose waxana dhici karta in uu jose soo xero galiyo xiddigan.
Wilfried Zaha – Crystal Palace to Tottenham: Kooxda Crystal Palace ayaa wax walba u samaynaysa sidii ay Zaha uga ceshan lahayd kooxda waaweyn xilli kooxaha Man city iyo chelsea ay xaaladiisa la socdaan laakiin kooxda Tottenham ayaa la aaminsanayahay in ay haatan tartanka loogu jiro hogaaminayso.
Theo Walcott – Arsenal to Southampton: Sida xiddigo badan oo England ah kana ciyaara Premier League Walcott ayaa si aad ah u doonaya in uu isaga tago kooxda Arsenal si uu fursad ugu helo ka qayb galka koobka adduunka Waxa amaah ku doonaysa kooxdiisii hore ee Southampton waxana laga yaabaa in uu heshiisku dhoco inta lagu jiro January.
Pierre-Emerick Aubameyang – Dortmund to Guangzhou Evergrande: Kooxda Borussia Dortmund ayaa wax walba u qabatay sidii ay u sii haysan lahayd Aubameyang laakiin kadib isku dhici ugu dambeeyay ee isaga iyo maamulka kooxda waxa ay u badantahay in uu bishan isaga tago kooxda reer Germany isaga oo ku sii jeeda kooxda ka dhisan horyaalka shiinaha ee Guangzhou Evergrande.